२५० म्युजीक भिडियो गरीसकेका महेन्द्र भन्छन, ‘अहिलेसम्म सेक्सी मोडल त खासै भेटिन’ | Artist Khabar
२५० म्युजीक भिडियो गरीसकेका महेन्द्र भन्छन, ‘अहिलेसम्म सेक्सी मोडल त खासै भेटिन’	माघ, काठमाडौं । नेपाली म्युजीक भिडियोको क्षेत्रमा करिब २५० भन्दा बढिमा अभिनय गरीसकेका मोडल महेन्द्र गौतम अहिले पनि उत्तिकै ब्यस्त छन् । आधुनिक भन्दा लोक दोहोरी गीत कै भिडियोमा बढि देखिने महेन्द्र लोकदोहोरी मोडल भनेर पनि चिनिन्छन् । रोमान्टिक र सेन्टिमेन्टेल दुबै प्रकारका गीतहरुमा फिट देखिने महेन्द्रसँग आर्टिस्ट खबरका लागी गोपिकृष्ण चापागाईले गर्नुभएको कुराकानी ।
२५० वटा म्युजीक भिडियोको दौरानमा लोक र आधुनिकमा कुन बढि गर्नु भो ?
अहिलेसम्म त लोक दोहोरी गीत नै बढि गरेको छु । त्यसैले पनि मलाई लोक दोहोरी मोडल भनेर पनि चिन्नुहुन्छ धेरैले ।
अहिलेसम्म काम गरेको मध्ये काम गर्दा सहज लागेको सहकर्मि मोडलको नाम लिनु पर्यो भने ?
काम त धेरैसँग गरेको छु । सजिलो त धेरैसँग हुन्छ । तर नामै नै लिनुपर्दा अनुजा निरौलाको लिन्छु । किनकी उहाँसँग अरु साथीहरु भन्दा अझ सहज भएको महसुस गर्छु ।
अनि अहिलेसम्मकै सेक्सी सहकर्मि मोडल कोहि लागेको छ कि ?
त्यस्तो सेक्सी नै भन्ने त लाग्दैन । अरु भन्दा अलि फरक खालको र धेरैले मेरो जोडि चाँहि रञ्जिता गुरुङ सँग मिल्छ भन्नुहुन्छ । उहाँकै नाम लिनुपर्ला कि ?
पछिल्लो समय लोकदोहोरीमा पनि अपाच्य शब्द र ड्रेस पनि त्यस्तै किसिमका आउन थालेका छन् नि, बिकृती भन्नुहुन्छ कि समयको माग ?
अब समय अनुसार हरेक कुराको विकास सँगसँगै बिकृती त आईहाल्छ नै । अब त्यस्ता बिकृती आएभने हामीले त्यसलाई उस्काउने भन्दा नि डोमिनेट गर्ने तिर गईयो भने बिस्तारै हराएर जान्छन् तर हामी तिनै कुराको चर्चा बढि गर्छौ, तिनै कुराको समाचार बढि बन्छन् त्यस्ले गर्दा नि त्यस्तै बिकृती निकाल्नेहरु उस्किनु हुन्छ ।
अनि अहिलेसम्म फिल्ममा हिरो बन्नु पर्यो भनेर अफर आको छ नि नाई ?
फिल्मको लागी अफर त आको छ । कुनै मा साइड रोल, कुनैमा हिरोको साथी, तर खै के मिलेको छैन के मिलेको छैन । अहिलेसम्म फिल्ममा खेलेको छैन। मेरो सोचाई फिल्ममा इन्ट्री रोल राम्रो होस् भन्ने हो, हेरुम के हुन्छ ।
मोडलमा हुनुपर्ने ठ्याक्कै तिन वटा विशेषता भन्नु पर्यो भने ?
अबम ोडलमा त धेरै बिशेषता हुनु जरुरी छ, त्यस्तै मोडल बन्छु भनेर त हुदैन । तर ३ वटै भन्नु पर्दा लुक्स, अभिनय र धैर्यता ।
पछिल्लो समय बिशेषता नभएका र पैसा हुनेहरु मोडल बन्नु भएको पाउँछौं नि उहाँहरुका लागी केहि भन्नुहुन्छ कि ?
अब खासै त केहि भन्दिन । किनकी कतिको रहर हुन्छ, कतिले केहि गर्न सक्छु कि भनेर आउनुहुन्छ, यदि साच्चिकै केहि गर्छु भन्नु भएको छ भने, डान्स , अभिनय सिक्नुस, यो फिल्डलाई बुझ्नुस, पैसाले मात्र हुँदैन । अनि आफुलाई के गर्दा कस्तो अभिनय गर्दा सुहाउँछ त्यो रोज्दा राम्रो हुन्छ ।
Yam Chhetri says:	January 16, 2016 at 5:42 pm	safal modal pyaaro sathi